Ny iTouch ID dia manolotra sensor ho an'ny tanan-tànana ho an'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ny iTouch ID dia manolotra sensor ho an'ny tanan-tànana ho an'ny Mac
Nandritra ny taona maromaro izao, mpanamboatra isan-karazany no nisafidy ny hiaro ny solosaina findainy amin'ny alàlan'ny fampidirana fantsom-pifandraisana. Raha marina izany tsy dia mety loatra raha ampiasaina ho toy ny Touch's iPhone, manatanteraka tsara ny asany ary mamela antsika hisoroka ny fidirana amin'ny PC tsy misy ny rantsantanantsika na ny teny miafintsika, raha azo ampiharina.
raha mbola Apple dia tsy nanampy sensor ho an'ny fitaovana fotsiny ary io dia efa eo am-pelatanan'ny finday rehetra misy azy eny amin'ny tsena mifototra amin'ny iOS, raha te hahafahantsika mamoha ny Mac amin'ny alàlan'ny rantsantanantsika isika dia mila mampiasa fitaovana fahatelo.
Raha reraka isika tsy maintsy mampiditra ny teny miafintsika isaky ny mamadika ny Mac isika dia afaka mampiasa rindrambaiko antoko fahatelo mifandray amin'ny iPhone ka indray mandeha eo akaikin'ny Mac izahay dia voavaha io. Na afaka manohana fitaovana vaovao mitady famatsiam-bola ao amin'ny Kickstarter antsoina hoe iTouch ID isika.
iTouch ID dia fitaovana iray mifandray amin'ny USB an'ny Mac (mety ihany koa ho an'ny PC) sy nmamela anao hamaha ho azy ny Mac anao amin'ny alàlan'ny famindrana ny rantsan-tànanao amin'ilay sensor. Ity sensor ity dia tsy mamela antsika hamaha ny fidirana amin'ny Mac fotsiny fa mamela antsika hampiasa azy io ho toy ny fampiharana 1Password.
Rehefa mahita ny tenantsika eo amin'ny pejy fidirana amin'ny serivisy rehetra mangataka ny solonanarana sy ny tenimiafinay izahay dia mila mamafa ny sensor fotsiny mba ho feno ny mombamomba anay ireo saha izay efa niditra sy nalamina tao anaty rindrambaiko isika teo aloha miaraka amin'ity fitaovana ity.
Hita ao amin'ny loko isan-karazany ny iTouchID ary afaka izao isika tahirizo ny volanay 99 dolara amerikana. Ny totalin'ny vola ilaina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa dia $ 73.000 NZ ary manangona efa ho 43.000 XNUMX $ izy ireo ankehitriny rehefa mbola misy 18 andro hamita ny tetikasa mitady famatsiam-bola.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny iTouch ID dia manolotra sensor ho an'ny tanan-tànana ho an'ny Mac
Mamaha ny lagy izay mitranga rehefa misafidy ny "Open with" ao amin'ny OS X
Ny 'Ady lehibe fahatelo' miaraka amin'i SKYHILL ao amin'ny Mac App Store